မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကျောင်းထွက်နှုန်း အမြင့်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း ပညာရေး ပြည်ထေ? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကျောင်းထွက်နှုန်း အမြင့်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း ပညာရေး ပြည်ထေ?
မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကျောင်းထွက်နှုန်းအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးက ပြောကြားခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီက နေပြည်တော်ကောင်စီနယ် မြေ၊ ပျဉ်းမနားမြို့၊ ရွှေချီရပ်တွင် တည်ရှိသည့် အမှတ် (၆၄) အခြေခံ ပညာမူလတန်းကျောင်း ပြည်သူပိုင်ကျောင်းမြေနှင့်(၁၂၀ ထ ၃၁ ထ၂၅)ပေ RC နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင် ပေးအပ်လှူဒါန်းပွဲသို့ တက် ရောက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
“၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ယူနက်စကိုရီပို့အရ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျောင်းထွက်သူဦးရေ အများဆုံးနိုင်ငံဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံလူဦးရေ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံနဲ့ဆို တစ်ရာခိုင်နှုန်းမရှိပါဘူး။ ဒုတိယအများဆုံးပူးတွဲနိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံဟာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်နိုင်ငံနဲ့ ၂ ဒသမ ၂ ဘီလီယံနဲ့ ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံလူဦးရေသည် သန်းပေါင်း ၂၅၀ ဖြစ်ပါတယ်။ သန်းပေါင်း ၂၅၀ ထဲက ၂ ဒသမ ၂ သန်းဆိုတာသည် ကျောင်းတက် တဲ့သူလူဦးရေနဲ့ သူ့နိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေနဲ့ တစ်ရာခိုင်နှုန်း မရှိပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေသည် ၅၅ သန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ၂ ဒသမ ၂ သန်းဆိုတာသည် နိုင်ငံရဲ့လူဦးရေရဲ့ လေးရာခိုင်နှုန်း ဝန်းကျင် ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျောင်းထွက်မှု အများဆုံး၊ အမြင့်ဆုံးနိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးက ပြောသည်။
ဆက်လက်ပြီးပညာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးက”ကျွန် တော်တို့ရဲ့ မူဝါဒကတော့ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ ချန်မထားဘဲ ကျောင်း ထွက်သူမရှိရေးနဲ့ မည်သည့်ခွဲခြားမှုမရှိဘဲနဲ့ ကျောင်းအပ်နှံခွင့်ရရှိရေးနဲ့ ပညာသင်ခွင့်ရရှိရေးဟာ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ နံပါတ်တစ်ဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနံပါတ်တစ်ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ကျောင်းရှိဖို့၊ စာသင်ဆောင်ရှိဖို့၊ ဆရာ၊ ဆရာမရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ကျောင်းအပ်နှံမှုနှုန်းတွေ မြင့်မားဖို့နဲ့ ကျောင်းထွက်သူမရှိရေး ကြိုးပမ်းအကောင်အ ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အတန်းကူးပြောင်းနှုန်းတွေ မြင့်မားဖို့ကိုလည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကြိုးပမ်းအကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေ ကိုလည်း တစ်နှစ်တစ်တန်း မှန်မှန်တက်ပြီး မူလတန်းပညာသင်ယူ ပြီးမြောက်စေလိုတယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေသည် စာသင်ခန်းထဲမှာရှိတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအားလုံးကို စာဖတ်တတ် အောင် စာရေးတတ်အောင်၊ အခြေခံသင်္ချာ အတွက်အချက်ကျွမ်း ကျင်အောင် သင်ကြားသင်ယူတတ်မြောက်မှု အရည်အသွေးရှိအောင် သင်ကြားသင်ယူ ပြုစုပျိုးထောင်လေ့ကျင့်ပေးဖို့အတွက် အရေးကြီးပါတယ်”ဟုလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။